Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » Usuku lwe-IMEX Buzz linceda ekwenzeni ababukeli bendlela
Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Usuku lwe-IMEX Buzz
Iingcali zomnyhadala weshishini zingafunda ukuba ngabajongi bendlela kunye nokwenza iimveliso, iinkonzo kunye namaphulo alungiselelwe iimfuno zexesha elizayo kwi-IMEX Buzz Day. Amava asimahla enzeka ngoLwesithathu, nge-15 kaSeptemba, aneliso elinye ngokuqinileyo kwikamva ngeeseshoni zepaneli ezigubungela oko kulindelwe kwilizwe lezorhwebo, iminyhadala kunye netekhnoloji.
Iiseshoni ezibonakalayo ziphonononga iindlela ezizayo kunye nokuhambisa umkhondo wangaphakathi kwi-IMEX America
UMsunguli weLizwe elitsha laBantu abaFanayo kunye nomlindi ohamba phambili, uDavid Mattin, uya kukhokelela kwikamva leeseshini zeBuzz.
Uya kwabelana ngeendlela eziphambili ezibekwe ekumiseni kwakhona isimilo kunye nokulindelweyo kule minyaka ilishumi.
Ikamva lobuchwephesha liya kuba kukudweliswa kweengcali zeshishini ekwabelaneni ngemibono ngekamva kwishishini leziganeko.
Okokugqibela kuthotho lweeNtsuku ze-Buzz kwi-IMEX BuzzHub ikwayilelwe ukubonelela ngengoma engaphakathi kuhlelo lwe-10th lwe-IMEX America kule-Novemba, inceda abathathi-nxaxheba ukuba bacwangcise amava abo omboniso, bekhokelwa liqela le-IMEX.
Ihlabathi elitsha, abantu abafanayo, iiseshoni ezahlukileyo ezijolise kwikamva
Umlindi ohamba phambili okhokelayo uDavid Mattin, umsunguli weLizwe Elitsha Abantu abaFanayo, ukhokelela kwikamva leeseshini zoSuku lweBuzz. Uluntu lwakhe olungaphezulu kwe-14,000 "yemiphefumlo efuna ukwazi" izinikele ekutshintshisaneni ngemibono ngekamva leziqhelo, itekhnoloji, kunye noluntu. UDavid uza kwabelana ngeendlela eziphambili ezibekwe ekumiseni kwakhona isimilo kunye nokulindelweyo kule minyaka ilishumi kunye neengcebiso ezisebenzayo zokuchonga oko kujikeleze ikwenze isicelo sokucwangciswa kweshishini.
UDavid Mattin, umseki weLizwe elitsha laBantu abaFanayo
Kwenye intlanganiso,Ikamva leThekhinoloji Kuphononongwe ziingcali ngasemva Run the World, Swapcard, Cvent kunye EventMB. Umphathi we-IMEX yeQela uCarina Bauer ujoyine iqela leenkwenkwezi zeengcali ezabelana ngemibono Ikamva liphethe ntoni kushishino lweziganeko? Ukujoyina uCarina kwiphaneli kuya kuba nguNicola Kastner, VP, iNtloko yeHlabathi yeQhinga lokuThengisa uMnyhadala, i-SAP; Amadama eColja, umnini, amadama eVok; kunye noMike Dominguez, uMongameli kunye ne-CEO, ALHI.
Indlela eya eMandalay Bay
Kuluhlu lweeseshoni "Ndibuze nantoni na", abathathi-nxaxheba bayamenywa (phantse) ukuba badibane neqela le-IMEX eliza kubonelela ngomkhondo wangaphakathi kumalungiselelo omboniso. Iqela loMthengi eliHanjisiweyo liya kwabelana ngeengcebiso ezisebenzayo ukunceda abo batsha kubo Amava e-IMEX ukufezekisa elona xabiso lishishini-kunye nolonwabo oluphezulu! - ukusuka kumboniso. Baza kwazisa abathathi-nxaxheba kwikhaya elitsha le-IMEX America, eMandalay Bay.
Amaqela okuSebenza e-IMEX aza kwabelana ngolwazi kumava omboniso, ukusuka kuyilo ukuya kumanyathelo ezempilo nokhuseleko kunye nolwazi olubaluleke kakhulu kumalungiselelo. Baya kunika iinkcukacha ngendlela abayila ngayo umboniso okhuselekileyo kodwa ongenabunyumba, ngokuhambelana neemfuno zamva nje zokhuseleko.
Gqi beleni, Ndibuze nantoni na malunga nento ekwi-IMEX America nokuba ungaphoswa yintoni! ubona iqela loLwazi labelana ngohlaziyo lwamva nje kwinkqubo yesithethi esikhuthazayo, amanyathelo amatsha omboniso kunye neminyhadala yaseLas Vegas.
UCarina Bauer, umphathi weQela le-IMEX, ucacisa athi: “Ukuqikelela nokuphendula kubume beshishini bexesha elizayo ngamanye amaxesha kunokuba nzima, kodwa kuhlala kubalulekile. Uluhlu lwethu olunomdla lweengcali lujolise kwi-laser kwikamva kwaye banokwabelana ngolwazi malunga nophuhliso olusetiweyo ukubumba umhlaba wethu.
“Nge-IMEX America eyenzeka ngo-Novemba, ngoku siqinisekile kwindlela eya eMandalay Bay. Usuku lwethu lokugqibela lwe-IMEX Buzz luyilelwe ukuvula indlela, ukwazisa iminyhadala yoshishino kubantu abasebenza emfihlekweni ukuyila umboniso okhuselekileyo, ogcwele amathuba okufunda nawenzelwe ukuhambisa ixabiso lokwenyani lokwenyani. ”
Iqonga le-IMEX BuzzHub lenzeka nge-15 kaSeptemba, lihambisa unxibelelwano lomntu, ixabiso leshishini kunye nomxholo ofanelekileyo "kwiNdlela eya eMandalay Bay" ukuya kuthi ga kwi-IMEX America, ngoNovemba 9-11, kunye noMvulo weSmart, onikwe amandla yi-MPI ngoNovemba 8 .
Ubhaliso lweBuzzHub lusimahla.
# IMEX21 kunye #IMEXbuzzhub